Nin ku nool waddanka Soomaaliya oo nolosha la wadaaga Yaxaasyo ay saaxiibeen | Xarshinonline News
Nin ku nool waddanka Soomaaliya oo nolosha la wadaaga Yaxaasyo ay saaxiibeen
Jawhar, (NNN)- “Waxaanu u socdaallay badhtamaha Deegaan dhaqan ahaan ilaa xad reer Miyi ah oo ah Soomaaliya, si aanu ula kulano Nin Yaxaasyo kula nool Webiga Shabeelle.” Sidaa waxa lagu bilaabay Warbixin lagu baahiyay Shabakadda wararka ee Sunatimes, taas oo la xidhiidha hab-nololeedka Nin Soomaali ah oo la nool Yaxaasyo.
Warbixintan oo uu qoray Cabdinaasir Maxamed Guuleed oo ah Suxufi Soomaali ah, isla markaana ku qornayd Afka Ingiriisiga, ayaa iyada oo dhamaystiran u dhignayd sidan;
“Waligaa ma maqasheen Qof bani’aadam ah oo hoggaamiye u ah Yaxaasyo? Had iyo jeer maan rumaysan jirin oo waxaan moodayay in ay arrintani tahay sheeko caruureed khiyaali ah. Laakiin, markii dambe waxaan go’aansaday in aan tago goobaha ay ku nool yihiin Yaxaasyadu.
Baadhistaydii waxay I geysay Magaalada Jawhar oo ah magaalo 55-Mayl Muqdisho ka xigta dhinaca Waqooyiga. Waxa jira Madaar ku yaala dhinaca waqooyi ee magaalada. Waa arooryo hore, waxaanan tegay tuulada Kulundi oo ilaa 4 Mayl dhinaca waqooyi-galbeed ka xigta Jawhar, halkaas oo aan kula kulmay nin dhinac fadhiya Webiga Shabeelle oo gacmihiisa mid ka mid ah ku haya Kalluun yar.
Salaan aanu isweydaarsanay ka dib, waxaan waydiiyay waxay shaqadiisu tahay. Wuu qoslay, waxaanu ii sheegay in uu yahay hoggaamiye Yaxaas oo uu la nool yahay. Ka dib markii in cabbaar ah aanu kaftanay ee uu faahfaahin iiga siiyay habka uu ula nool yahay iyo sida uu amarrada u siiyo Yaxaasyada sidii Masuul shaqaalihiisii kala diraya, wuxuu si kedis ah iiga codsaday in aan ka aqbalo in uu I tuso sida uu ugu imanayo mid ka mid ah Yaxaasyadu marka uu magac ugu yeedho. Aniga oo la amakaagsan, isla markaana waxoogaa yar naxsan, ayaan ka aqbalay in uu sidaa yeelo, isaguna wuxuu ku dhawaaqay magac. Si degdeg ah waxa Webigii uga soo baxay Yaxaas yar, waxaanu fadhiistay dhinacayaga. Aniga oo ka welwelsan in uu na weeraro Yaxaaska na ag-fadhiyaa, ayaan waydiistay in aan ka durko Yaxaaska. Laakiin, wuxuu ii sheegay in aan is-dejiyo.
Dabadeed, Yaxaaskii yaraa wuxuu saaray garabkiisa midig, waanu la istaagay, isaga oo ula dhaqaaqay dhinaca Gurigiisa, isla markaana uu iga codsaday in aan u raaco. Markii aanu tagnay Gurigiisa, waxaan arkay Yaxaas ilaalinaya cidda galaysa Guriga.
Hassey Muse (maaha magaciisa dhabta ah) ayaa ku-sii sime ka ahaa xilka hoggaamiyaha Yaxaasyada, waxaanu fadhiyay meel u dhaw Hoygiisa. Mid ka mid ah Yaxaasyadii, ayaa si cadho badani ka muuqato dhinacayga ugu soo dhaqaaqay, laakiin Hassey ayaa Luuqad uu garanayo ugu sheegay Yaxaaskii in aanu ka dhaqaaqin halka uu taagan yahay. ‘Wuxuu ku arkayaa in aad tahay qof qariib ah ama cusub, waxaanu doonayaa in uu ku weeraro, laakiin meelna uma dhaqaaqi karo amar la’aan. Yaxaasyadu waa qayb ka mid ah Qoyskayaga, sababtoo ah way nagu dhex nool yihiin’ Ayuu yidhi Hassey. ‘Qoyskayagu way ku faraxsan yihiin Yaxaasyada, balse Yaxaasyadu cidna ma weerari karaan ilaa aan amar siiyo in ay ciddaas weeraraan.’ Ayuu intaa raaciyay.
Markii aan waydiiyay in ay dhici karto weerar aan la filayn oo kaga yimaadda dhinaca Webiga, waxa uu sheegay in waxyaabaha ugu badan ee ay Yaxaasku ka feejigan yihiin tahay.
Waxaanu tagnay dhinaca Webi, si aan u arko habka uu amarrada u bixiyo. Hassey wuxuu ii sheegay in aanan cabsanin marka ay Yaxaasyadu qaataan amarada iyo hadallo macnahoodu yihiin in ay isaga u yimaadaan. Waxaana markiiba si degdeg ah dibedda Biyihii uga soo baxay saddex Yaxaas oo dhaadheer, waawayn, isla markaana dhiniciisa u soo dhaqaaqay.
Hassey oo hoggaamiye-dhaqameed ka ah Tuulada Kulundi, isla markaana Yaxaas yar garabkiisa midig ku sita, ayaa ii sheegay in hoggaaminta Yaxaasyadu ay tahay wax uu ka dhaxlay Awowyadii.
Deegaankan noloshu si hoose ayay uga socotaa, Hassey Caruurtiisu ma tagaan Dugsiyo, mana bartaan Quraanka. Waxay iska joogaan Guriga oo waxay bartaan sida loo dabbaasho, loo kalluumaysto, lana ugaadhsadaan Aabahood. ‘Sidaan rejaynayo mustaqbalka dhaw, Wiilashayda yaryari waxay noqon doonaan ugaadhsadayaal waawayn sidayda oo kale.’ ayuu yidhi Hassey oo wakhtigaa tuurayay Xadhig ka kalluumaysiga ahi.
Hassey wuxuu sheegay ficillo tiro yar oo kaga yimaada dhinaca Yaxaasyada. ‘Bishii hore Xaaskayga waxa ka go’ay afar farood, ka dib markii Yaxaas yari uu Lugteeda midig dhaawac gaadhsiiyay.’ Ayuu yidhi Hassey oo la waydiiyay in ay suurtogal tahay in ay khatar ugu jiraan weerar ay Yaxaasku ku qaadaan. Waxaanu sheegay in Yaxaasyadu ay tababaran yihiin oo aanay falalkaas ku kacaynin.
Magaalada Jawhar waxa kale oo aan kula kulmay Faadumo Ducaale oo ah Hooyo 31 jir ah, waxaanan wax ka waydiiyay arrimaha Hoggaamiyaha Yaxaasyada. Hase ahaatee, intay qososhay ayay ii sheegtay in kelmadahaas ay markay yarayd ka maqli jirtay Ayeydeed.
Weerarada Yaxaasyada ayaa caan ka ah Gobolka Shabeellada dhexe, halkaas oo caruur iyo dad waawaynba ay ku dileen ama ku dhaawaceen..Sanadkan oo kaliya inta la ogyahay hal qof ayay cuneen…”
← Taageerayaasha Xisbiga UCID oo khalkhal geliyay xisbiyada kale ee KULMIYE iyo UDUB
Isu-soo-bixii ololaha maalinta 2aad ee xisbiga talada haya ee UDUB iyo taageerayaashiisa →